Geophone Tambo, Horizontal Geophone - XYB
XYB inounza pamwechete tarenda repasirose repamusoro uye hunyanzvi, ine vashandi vekunze vane hunyanzvi.
Nekombiki yepamusoro, zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, mutengo unonzwisisika, pamwe nevatengi vedu kusangana neramangwana rakajeka ..
Iine "mushandisi-yakatarisana, gadzira iyo yepamusoro mutengo kune vashandisi" bhizinesi zvinangwa.
Iyo kambani ichaenderera ku "chaiyo, kuchenjera, kuomarara" bhizinesi maitiro.
240 Hz Yakakwirira Inopengera Kakawanda Girafoni Ge75 0.75% L ...
240 Hz Yakakwirira Inopengera Kakawanda Girafoni 0.1% Lo ...
200, Yakakwira-Kupisa Geophone YB-15A-2400CR
100Hz High Akarurama Uye Muchitevere Signal Output Ge ...
Wuhan XYB Geophysical Kuongorora Zvishandiso Co., Ltd.
Iyo kambani yakazvipira kune iyo R & D, kugadzira uye kutengesa kwe petroleum yekuongorora zviridzwa, kuchera uye zvigadzirwa zvekugadzira, uye geophysical yekuongorora michina. Yakapfuura ISO9000 yemhando manejimendi manejimendi sisitimu, kwezvakatipoteredza manejimendi sisitimu, yehutano pabasa uye chengetedzo manejimendi sisitimu.
Iyo inotungamira zvigadzirwa zve seismic yekutsvaga geophone ine matanhatu akateedzana, anopfuura makumi matanhatu marudzi.
Zvigadzirwa zvinoshandiswa zvakanyanya mu petroleum, zvicherwa uye kuongorora kwegeological, mugwagwa, zambuko, dhamu uye mugero kuvaka, rinorema michina vibration, kudengenyeka kwenyika kudonongorera nezvimwe.
Mhando dzinopfuura makumi matanhatu dzakapihwa mvumo yekushandisa patent yenyika
Kusanganisira vanopfuura makumi maviri patent yekugadzira, anopfuura gumi marudzi eeprovince-chikamu chesainzi uye tekinoroji budiriro, uye anopfuura makumi maviri emunyika, ematunhu nemasekuru mibairo yesainzi uye tekinoroji. Yakapfuura ISO9000 yemhando manejimendi manejimendi sisitimu, kwezvakatipoteredza manejimendi sisitimu, yehutano pabasa uye chengetedzo manejimendi sisitimu.
Yakapfuura ISO9000 yemhando manejimendi manejimendi sisitimu, kwezvakatipoteredza manejimendi sisitimu, yehutano pabasa uye chengetedzo manejimendi sisitimu.
Musika wechigadzirwa wakafukidza minda mikuru yemafuta emombe uye minda yemarasha, uye yakatumirwa kuEurope, America, Africa neSoutheast Asia nedzimwe nyika dzinopfuura makumi mashanu nematunhu.
Hwemhando yechigadzirwa kuita uye mukurumbira wakanaka zvinoenderana nekugamuchirwa kukuru uye kurumbidzwa.
Sercel Uye Tronic Chikwata Chakwira Kune MEMS Yakavakirwa maGeophones
Sercel uye TRONIC'S Microsystems, vakabatana mukugadzira chizvarwa chitsva chema seismic sensors, kana mageophones, akavakirwa paMEMS. Yakagadzirwa naECA Leti, iyo 0.1µg resolution accelerometer yakarongedzwa pasi pevhavha yakagadziridzwa uye kuvandudzwa neTRONIC'S Microsystems. Ge ...
Urban Geophone Array Inopa Kutaridzika Nyowani kuLos Angeles Basin
1 Nyamavhuvhu 2018 – Tichishandisa runyorwa rwekofi-inogona saizi geophones yakatumirwa kweinenge mwedzi mumashure, nzvimbo dzegorofu nemapaki eruzhinji, vaongorori vakaunganidza data rakaringana kuti vabvumidze mepu kudzika uye chimiro cheSan Gabriel neSan Bernardino sedimentary mabhesheni e Los Angeles, California. Seismo ...
Geophones Musika Kugovana, Saizi Global Yenyika Yepamusoro, Mikana, Matekisheni, Global Kukura, Kukanganisa kweCovid-19 paindasitiri, Inotungamira Kambani Kuongorora, Uye Yakakosha Nyika Forecast kusvika 2025
Chirevo cheGeophones Musika Pasi pekuongororwa pamugove wemusika nevatambi vakakosha, Mushumo weGeophones Market unovhara mari, mari, uye kuongororwa kwemitengo nebhizinesi pamwe nezvimwe zvikamu zvakaita se… Gwaro reMusika weGeophones Pasi peongororo yemugove wevatengesi, maGeophones Maka ...